Saddex qof oo ku dhaawacantay shil gaari oo ka dhacay gudaha Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandSaddex qof oo ku dhaawacantay shil gaari oo ka dhacay gudaha Boosaaso
April 12, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Gaariga oo burburshay makhaayada. [Sawirka: Facebook]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhaawacantay kadib markii gaari uu burburshay makhaayad kutaala gudaha magaalo xeebeedka Boosaaso maanta oo Khamiis ah, sida goobjooge uu u sheegay warsidaha Puntland Mirror.
“Gaariga oo xawli ku soconaya ayaa wadada ka baxay waxaana uu gudaha u galay makhaayad ku dhow huteel Ramaada ee magaalada Boosaaso saakay oo Khamiis ah,” goobjoogaha ayaa sidaa yiri.
Gaariga shilka galay ayaa ahaa Toyota Probox. Labo kamid ah dadka ku dhaawacmay oo xaaladoodu liidato ayaa loola cararay isbitaalka, sida goobjooguhu sheegay.
Sanadkii 2017-kii, 358 qof ayaa ku geeriyooday shilal gaari oo ka dhacay gudaha Puntland, laanta booliiska ee nabadgelyada waddooyinka Puntland ayaa warbixin ku sheegtay ay sii deysay horaantii sanadkan.
Garoowe-(Puntland Mirror) Roobab ayaa ka da’aya deegaanada xeebaha Puntland 24 saac ee la soo dhaafay. Gobolada Gaardafuu iyo Bari ayaa roobabka ugu badan ka da’ayaan iyadoo magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland uu roobku hayay [...]